သတင်း - အဘယ်ကြောင့် stainless steel Angle တွင်လိုဂိုလုပ်လိုသနည်း။
တစ်ခါတရံတွင် ထုတ်လုပ်သူမှ ပြုလုပ်သော တံဆိပ်ကို တွေ့ရလိမ့်မည်။stainless steel ထောင့်ထုတ်လုပ်သူ၊ ပစ္စည်း၊ သတ်မှတ်ချက် စသည်ဖြင့် အပါအဝင်၊ပိုက်ပေါ်တွင် တံဆိပ်ကပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဘယ်နည်း။Star Good Steel Co., Ltd. နားလည်ရန် သင်နှင့်အတူ it.
မာ၊ အမှတ်အသားနှင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည်။Stainless Steel Angle ထုတ်လုပ်သူများသည် အမှတ် ၃-၄ ဖြင့် ၆ မီတာရှည်သောပိုက်တစ်ခုစီတွင် stainless steel Angle steel ကိုထုတ်လုပ်သည်။သို့သော်လည်း ပိုက်ကို အမှတ်အသားပြုခြင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်ကို တိုးစေပြီး ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ကို ရှည်စေပြီး ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးစေသည်။ထို့ကြောင့် အချိန်နှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၊ Stainless Steel Angle ထုတ်လုပ်သူများသည် အဘယ်ကြောင့် Stainless Steel Angle တွင် လိုဂိုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြမည်နည်း။
အမှတ်တံဆိပ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ခွဲခြားနိုင်ရန်၊ အရောင်းအပြီးတွင် အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းပါ။
ဝယ်ယူထားသော stainless steel Angle သည် အရည်အသွေးပြဿနာများရှိပါက မည်သူကိုရှာသင့်သနည်း။လိုဂိုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤပြဿနာကို ကောင်းစွာဖြေရှင်းနိုင်သည်၊ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် ထုတ်လုပ်သူအား ရှာဖွေရန် အချိန်မီနိုင်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ လိုဂိုသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ ဂုဏ်သတင်းအာမခံချက်၊ နှုတ်ဖြင့်အာမခံချက်လည်းဖြစ်သည်။
1. ပစ္စည်းများကို ခွဲခြားပါ။
သံမဏိဈေးကွက် ပရမ်းပတာ၊ 201၊ 304 အစစ်အမှန်နှင့် အမှားကို ခွဲခြားရန် ခက်ခဲသည်၊ သာမန်မျက်စိဖြင့် ပစ္စည်းကွာခြားမှုကို ယေဘုယျအားဖြင့် ခွဲခြားရန် ခက်ခဲသည်။ပစ္စည်းအမျိုးအစားကို စတီးပိုက်ပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ထားပြီး ပစ္စည်းကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်။
2၊ ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များကို ရှင်းလင်းပါ။
Stainless Steel ၏မျက်နှာပြင်တွင် Angle steel သည် ဝယ်ယူသူများ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်၊ ၎င်းတို့လိုအပ်သော ပိုက်အမျိုးအစားနှင့် ပိုက်အမျိုးအစားများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မော်ဒယ်များကို ထိမှန်ပါသည်။